Bubble Shooter2အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（35.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Bubble Shooter 2
Bubble Shooter2သည်ရာနှင့်ချီသောပဟေ puls ိများနှင့်ပျော်စရာအခက်အခဲများနှင့်အတူစွဲလမ်းစေသောပူဖောင်းပါ0င်သောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အခမဲ့ကစားပါ။
ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ပေါ့ပ်ရောင်စုံပူဖောင်းသည်ဤအပန်းဖြေသောဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတွင်ပေါက်ကွဲပြီးပူဖောင်းထုပ်ပိုးထားသောပဟေ les ိများနှင့် ဦး နှောက် teasers များအားလုံးမှတစ်ဆင့်သင်၏လမ်းကိုအလုပ်လုပ်သည်။ အဆင့်ဆင့်နှင့်အနိုင်ရဒင်္ဂါးပြား! ဤပျော်စရာပူဖောင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းသည်မိသားစုတစ်စုလုံးကစားရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးကစားရန်လွယ်ကူသည်။ ယခုစွန့်စားခန်းကိုယခုစတင်ပါ, ဘောလုံးကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်ဂန္ထဝင်အံ့သြဖွယ်ပဟေ game ိဂိမ်းကိုရှာဖွေပါ။
ပူဖောင်းများအားလုံးကိုပေါ်လာရန်ရုန်းကန်နေရ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပူဖောင်းစွန့်စားမှုနဲ့ပူဖောင်းအင်္ဂါနေ့မှာအားကောင်းတဲ့ပမာဏကိုအားဖြည့်ပေးပြီးပူဖောင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်။ ပူဖောင်းသေနတ်သမား2ပဟေ gas ိဂိမ်းသည်သင်နှင့်အတူသဲကန္တာရကျွန်းသို့သင်နှင့်အတူသင်နှင့်အတူယူမည့်အရာများစာရင်းတွင်သေချာသည်။
Arcade သို့ သွား. Fun Bubble Shooter Retro Games ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါစို့ လာမည့်အဆင့်မှစိတ်အားထက်သန်! အကောင်းဆုံးစပျစ်သီးပြပွဲဂိမ်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သင်၏နည်းဗျူဟာစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းသို့ထည့်ပါ။ ယခု၎င်းကိုအခမဲ့ရယူပြီးနေရာတိုင်းတွင်မဆိုကစားခြင်း, မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်လိုချင်သလောက်ကစားပါ။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါ။
* ရာနှင့်ချီသောပဟေ puls ိညာဉ်များနှင့် ဦး နှောက်လက်တွေ့နှင့်သင်၏နည်းဗျူဟာနှင့်အရောင်ကိုက်ညီမှုစွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
Match နှင့် Pop Bubbles နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းပါ။
အားကြီးသောတိုးတက်မှုများနှင့် power-ups များကိုသော့ဖွင့်ပြီးပူဖောင်းများပေါက်ကွဲရန်သူတို့ကိုသုံးပါ။
* သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်သင်၏လက်ချောင်းများကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဘောလုံးကို ရည်ရွယ်. ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်အကြွေစေ့များကိုအနိုင်ယူပါ။
lev 🔥 burbles ကိုလောင်ကျွမ်းစေမည့်မီးဖိုချောင်ရောင်းချမည့်မီးဖိုချောင်ရွှေ့ရန်အတွက်ကြောက်စရာကောင်းသော Boadbles ဖြင့်အားသွင်း
🔥 POP7ပူဖောင်း သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောပူဖောင်းဗုံးတစ်လုံးနှင့် ပတ်သတ်. ပတ်0န်းကျင်ပူဖောင်းများကိုထုတ်ယူပါမည်။
ရာနှင့်ချီသောအံ့သြဖွယ်ပဟေ eto ိပဟေ et ိပက္ခအသစ်များပါ0င်သည်။
- အသစ်စက်စက်မိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်အကြိုက်ဆုံး Arcade ဂိမ်း။
- လှုပ်ရှားမှုထုပ်ပိုးဂိမ်း။ သင်ယူရန်ရိုးရှင်းပြီးစူပါပျော်စရာ!
- အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဦး နှောက်ထွေးသူများ, အစွမ်းထက်တိုးတက်မှုများနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်များ။
အကောင်းဆုံးပဟေ game ိဂိမ်းကစားခြင်း
Bubble Sholeter2သည်အနားယူခြင်း, ပျော်စရာ Bubble Popping Game ဖြစ်သည်။ ခေါင်းကြီးများ - သင်ကစားလေလေ, စွဲလမ်းမှုပိုများလေလေ! ထိပ်ဖျား: ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်ရရန်လှုံ့ဆော်မှုနည်းသောအဆင့်ကိုရှင်းလင်းရန်ကြိုးစားပါ။ အဆင့်သစ်တစ်ခုစီတွင်သင်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည့်အခြားပစ်မှတ်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရွေ့လျားမှုကိုဂရုတစိုက်နှင့်မီးကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ ဘဝကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲမည်သည့်အဆင့်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်မည်နည်း။
သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြပါ, ပူဖောင်းများကိုပြပါ။ ပဟေ les ိများအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်,
ပူဖောင်းသေနတ်သမား2သည်သင်ကစားခြင်းကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ကစွန့်ပစ်ထားသောကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင်အချိန်ကုန်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုသင်ကပ်နေလျှင်ပင်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောပူဖောင်းသေနတ်သမားဂိမ်းကစားရန်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကိုကြိုက်လား။ သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရချင်ပါတယ်! သင်၏ဂိမ်းကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းပြီးသင်၏ကြယ်ငါးပွင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Bubble Shooter ™၏အခွင့်အရေးများကို ianyon dynamics ltd. မှပိုင်ဆိုင်သည်။